पार्टी सभापति बन्न तयार छु : गगन थपा, पुरानो नेतृत्वको काम छैन
गोरखा/ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पार्टीको कार्यकारी पदमा पुरानो पुस्ताको आवश्यकता नरहेको बताउनु भएको छ । आइतबार बिहान गोरखा सदरमुकाममा प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता थापाले चौधौं महाधिवेसनबाट पार्टीको पुरानो पुस्ता कार्यकारी तहमा आउन नहुने बताउनु भएको हो ।
पार्टीको ब्यवस्थापन नयाँ ढंगले गर्नुपर्ने र सबै नेता कार्यकर्ता लागेर पार्टीको पुनस्व्यवस्थापन र्गनु पर्ने उहाँले जोड दिनुभयो । अबको महाधिवेशनबाट बाहिर निस्कदा भविश्यमा काग्रेसले के दिन्छ भन्ने आउनुपर्छ र नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्न बताउँनु भयो ।
पुराना पुस्ता नयाँ पुस्ताको भभिभावक बनिदिन पुर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘पहिलो पुस्ताका नेताले नेतृत्व गर्दा पार्टी जमेको पोखरी जस्तो भयो, पार्टीलाई बगेको नदी जस्तो बनाउनु पर्छ।, त्यसैले अब पहिलो पुस्ताका स्तुत्य नेताले हाम्रो अभिभावक बनिदिनु पर्छ’,
चौधौं अधिवेशनमा आफू केन्द्रीय सदस्यहरुले चाहे भने महामन्त्री, सभापति जे बन्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाले भन्नुभयो, ‘कथाले जे माग्छ , म त्यो गर्न तयार छु ।’ पहिलो पुस्ताले अहिलेसम्म पार्टीको इतिहास भजाएर मात्र काम चलाएकाले नयाँ इतिहास रच्न नयाँ पुस्ताको खाँचो रहेको उहाँको भनाई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले बैदेशिक सम्बन्धमा सरकार चुकिरहेको बताउँनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘प्रचण्डको वक्तव्यबाट हामीले के बुझ्ने ? के अब नेपालले एउटा नयाँ बाटो लिएको हो ? अब नेपालले सिरियामाथि भएको आक्रमण, अफगानिस्तानमा भएको घटना, कतारमा भएको नाकावन्दीबारे पनि बोल्छ ? महशक्ति राष्ट्रजस्तो संसारभर भएको सबै घटनाबारे नेपालले वक्तव्य जारी गर्छ ?’